Ngwa Ji Efere Cheesy Scalloped Poteto - Ezi Ntụziaka
esi nri ahihia ahihia n'ime ahihia
-esi mee ka toki anụ ezi crispy na oven
ihe okpomọkụ ka akpọọ nkụ toki anụ ezi
Ikuku Sckpukpọ Akwukwo Ahia
Ikuku Sckpukpọ Akwukwo Ahia dị mfe, cheesy na-atọ ụtọ! Mgbe agụụ ndị a na-eme n'oge oyi na-akụ, gịnị ma ị ga-esi esi nri poteto ngwa ngwa ngwa ngwa?
My ezinụlọ hụrụ a uzommeputa jere ozi n'akụkụ anyị mmasị meatloaf uzommeputa , na m nzọ gị ga-emekwa. Anya onye na-anaghị enwu enwu mgbe ha hụrụ efere nri ure nke ngwa ngwa osikapa a na-ere ngwa ngwa na tebụl? Nri zuru oke zuru oke.
Zuru oke poteto a asara n'ọkụ , sie ma ọ bụ gwere poteto , M hụrụ n'anya spuds n'ụdị ọ bụla!
Scalloped bụ ọkacha mmasị nke nne m ama ji sie skalloped nduku ẹphe hamata g'ẹphe bụru nri-ọcha; Ma ọ masịrị m ka ị jiri nwayọ esi nri nduku na-enweghị nri na nhicha nke ọcha ihendori gụnyere.
Akụrụngwa maka Dicha Ngwa Ngwa
Achịcha Scalloped Crockpot na-ejuputa ma na-adịghị mgbagwoju anya chọrọ nanị ihe ole na ole dị mfe! Ha na-agbaghara agbaghara, ị nwere ike ịdị iche usoro ga-esi kwekọọ na onwe gị. Gaa n'ihu ma nwalee!
Ihe ọ bụla “ude” ofe (dịka ude nke ero ma ọ bụ ude nke ọkụkọ ofe ) ga-arụ ọrụ na nhazi a.
Tinye oge ndi ozo kachasi nma gi ka o buru nke gi.
Mee nhazi ngwa ngwa site na iji nduku nwere udiri nkpuchi di ka akpukpo aru ma obu nke edo Yukon, adighi nkpachapu ahihia.
Akpachapụ poteto Russet ka akpụkpọ ahụ ha nwere ike isi ike.
.B. mandolin mpekere poteto ngwa ngwa na evenly. (Can nwere ike ịnweta ha Amazon maka ihe na-erughị $ 20 ).
Mkpa nduku esi nri ngwa ngwa, thicker poteto buru ogologo oge.
Achọrọ m maka cheddar dị nkọ karị maka ekpomeekpo cheddar ọzọ, ọ bụghị naanị maka ite ite skalloped poteto, mana usoro ọ bụla na-akpọ chiiz cheddar.
Cheddar dị nro ga-enye obere ụtọ. Gbalịa dị iche iche chiiz kpam kpam, Colby, Switzerland na Gruyere (ọkacha mmasị m mgbakwunye na Crock ite Mac na Chiiz ).
Etu esi eme poteto ite skalloped poteto
Ngwa jiri sie skalloped breeze iji kwadebe ma dị mma ma cheesy dị ka nke kachasị amasị anyị Nduku Au Gratin .
Thinly iberi na peeled nduku na yabasị
Gwakọta chiiz na ihendori
Uzo ozo nke iberibe nduku, sliced ​​yabasị na ihendori
Esi nri ma ọ bụ elu ma ọ bụ dị ala, dabere na oge nri abalị gị
Mgbe poteto dị nro, elu ya na chiiz ọzọ ma kpuchie ya ruo mgbe agbazee.
Ogologo oge ka esi esi nri nduku na crockpot
Ndị a dị mfe ịbanye na onye na-esi nri ngwa ngwa ma ọ ga-achọ ihe dị ka awa 4-5 na elu ma ọ bụ awa 7-8 dị ala.
Ọ bụrụ na poteto gị emechaa, gbanyụọ ngwa ngwa ngwa ngwa (ha ga-ekpo ọkụ ruo ihe karịrị otu awa) ma ọ bụ gbanwee ya ka ọ kpoo ọkụ.
Nduku ndị a na-eji nwayọ nwayọ ewepụtụ ọkụ na ngwa ndakwa nri ma ọ bụ na mgbe ụfọdụ, anyị ga-eri nri ndị fọrọ afọ na paịlị na-abụghị nke maka nri nri dị ụtọ!
Ebe ọ bụ na poteto cheesy skalloped na-enye afọ ojuju, ị nwere ike ịme nri ndị ọzọ ngwa ngwa ma dịkwa mfe. A bute ara okuko ma ọ bụ a anụ ụtọ anụ ezi , ya na salad ma obu veggies (stew broccoli ma obu akwukwo achicha na-acha nke oma).
More Nri Na-esikwu Efere
Agaghị esi nri nwayọ onye isi nri nduku
Iberibe ite ite ite
Mkpụrụ ọka Crock na Cob
Ite nduku esi eghe eghe
4,84site na42votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nri5 awa 10 Nkeji Oge zuru ezu5 awa iri abụọ Nkeji Ọrụ8 servings Onye edemedeHolly NilssonIhe kachasị mma bụ na ekwesighi iji oven…. na-ahapu oven maka isi efere gi! Anyị na-ahụkwa n'anya ị na-eje ozi a dị ka nri n'akụkụ iji soro steak (na ịkwesighi ikpo ụlọ ahụ n'oge ọkọchị maka otu akụkụ dị egwu!). Bipute Ntụtụ
▢3 paụnd nduku pee akpịrịkpịrị ma belata iberibe ya
▢½ buru ibu yabasị mẹ iphemiphe ọbule
▢1 ½ iko chiiz cheddar ekewa
▢10 ounce ude nke ọkụkọ ofe (1 nwere ike)
▢1 ½ iko ude dị arọ ekewa
▢¼ ngaji thyme
▢ose oji nụrụ ụtọ
Ikpokọta 1 iko cheddar cheese, ude nke ọkụkọ ofe, 1 cup arọ ude, garlic ntụ ntụ, thyme na ose oji nụrụ ụtọ.
Ghichaa onye na-esi nri ngwa ngwa 6qt ma tinye ebe ½ poteto na ala. Top na eyịm. Kesaa ½ nke ngwakọta cheese n’elu.
Add fọdụrụ nduku na ihendori. Wunye ½ iko ude dị arọ n'elu.
Kpuchie ma sie nri na elu 4-5 awa (ma ọ bụ obere 7-8 awa).
Ozugbo nduku dị nro, fesaa ya na remaining cup cheese na-ekpuchi ruo mgbe gbazee (banyere 5 nkeji).
Ozugbo mere nduku nwere ike ịnọgide na-ekpo ọkụ ruo 2 awa.
Calorisị:375,Carbohydrates:26g,Protein:iri na otug,Abụba:25g,Abụba Ajuju:iri na iseg,Cholesterol:Ogbe 86mg,Sodium:Ogbe 427mg,Potassium:Ogbe 788mg,Eriri:4g,Vitamin A:935IU,Vitamin C:20.4mg,Calcium:Ogbe 240mg,Iron:6mg
IsiokwuChikere Scalloped Poteto N'ezieSide efere Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .